Hal meel oo ay ka DHIMATAY dhibna ugu filan xukuumadda haatan jirta! (Dhacdada Garoonka?!!) | Hadalsame Media
Home Maqaallada Hal meel oo ay ka DHIMATAY dhibna ugu filan xukuumadda haatan jirta!...
Hal meel oo ay ka DHIMATAY dhibna ugu filan xukuumadda haatan jirta! (Dhacdada Garoonka?!!)
(Muqdisho) 10 Nof 2019 – Waxaa goor dhowayd magaalada Muqdisho gaar ahaan Gegada Aadan Cadde kasoo baxay war sheegaya in halkaa lagu ”xayirey”, wararka qaar waxayba leeyihiin ”waa la xirey!”, Xasan Seekh iyo Sheekh Shariif oo ah Madaxwaynayaal hore.
Yeelkeede, ilaa hadda dadku ma oga waxa dhacay iyo sida ay u dheceen mana aamini karaan warkan oo ka imanaya ilo aan toos ahayn ama 3-aad, balse iyagu marka dambe noqon doona warka ay dadku qaadanayaan sabab jirta darteed.
Markasta oo ay dhacdooyin noocan ihi dhacaan, waxaa xukuumadda jirta ku waajib ah inay dadka u sharraxdo waxa dhacay iyo qaabk ay u dheceen si haddii lacalla aysan sheekadu ahayn sida loo werinayo ay u siiyaan xog gacan 1-aad ah.
Ha yeeshee, waxay tani qayb ka tahay dhib wayn oo xukuumaddan ka haysta dhanka warfaafinta sabab kastaba ha ugu wacnaatee.
Tusaale ahaan, waxyaabo badan oo wanaagsan oo ay qabtaan waxaa meesha ka saarta faafin xumo ama faafin la’aan, dhacdooyin badan oo dhaca sida midda maantana marka ay shacabku waayaan cid kala hadasha oo u sharraxda iyaga ayaa iska micnaysta, afgaroocnimadaasina waxay sii dishaa sumcadda xukuumadda jirta, maadaama ay kasii horreeyso in wanaaggii ay sameeyeen aan si wanaagsan shacabka looga haqab tirin oo halkaa QAAN looga lahaa, dhacdo kasta oo tabani waxay sii cunaysaa dhibcohoodii.
Soomaalidu waxay tiraahdaa ”nin gunti xumi inuu wax qarsanayaa la moodaa!”, waxaa haddaba wanaagsan inay xukuumaddu ka faa’iidaysato aaladaha warbaahineed ee ay leedahay una adeegsato si wax ku ool ah oo aanay dadku u baahanin inay iyagu fasirtaan inta badanna dhanka khaldan lala aado, umuuro badan oo aan u dhicin sida loo dhigayo.
Muhim maaha inay madaxda sare hadlaan, balse ogaanteey waxay DF leedahay laba waaxood oo warfaafineed oo Madaxtooyada ku sugan, TV, Idaacad iyo Wakaalad War, Wargays baan xitaa mar arkayay, ha yeeshee, waxaas oo dhami si ku filan uma shaqeeyaan.
“Afkaagoo ku xira oon ku furin alle goo baa la yidhaahdaa”
Previous articleLaba gabdhood oo Soomaali ah oo caalamka ka yaabiyey! (Guulo ay gaareen)
Next articleDAAWO: ”Xitaa haddii aysan doorasho dhicin dad baan qixinaynaa war maaha!”